जायन मलिक र गिगी हदीद दुई वर्ष पछि विभाजित - समाचार
मुख्य मनोरञ्जन शैली सेलेब्स ब्लग
जायन मलिक र गिगी हदीद दुई वर्ष पछि विभाजित
जायन मलिक र गिगी हदीद दुई भन्दा बढी बर्ष पछि सँगै टुक्रिएको छ।
अब्राम / बीएफए / आरईएक्स / शटरस्टक
गायकले मार्च १ Twitter मा ट्वीटरमा समाचार पुष्टि गर्‍यो।
'गीगी र मैले एउटा अविश्वसनीय अर्थपूर्ण, मायालु र रमाईलो सम्बन्ध बनाएका थियौं र एक महिला र साथीको रूपमा म गीगीको लागि ठूलो सम्मान र सम्मान गर्दछु। उनीसँग यस्तो आश्चर्यजनक आत्मा छ, 'उनी लेख्यो । 'यस कठिन निर्णय र हाम्रो गोपनीयतालाई यस समय सम्मान गर्नेका लागि म हाम्रा सबै फ्यानहरूको आभारी छु, हामी आशा गर्दछौं कि यो समाचार पहिले हामीबाट आउँदछ। हामी तपाईं सबैलाई माया गर्छौं। xZ
- zayn (@ zaynmalik) मार्च १,, २०१।
उनको पुष्टिकरण मा एक रिपोर्ट पछि सूर्य यस महिनाको शुरुमा दुबै फुट्यो।
कृष्ण Thea लक्ष्मी - डेल
'दुखको कुरा Zayn र Gigi अलग छन्। तिनीहरू अब एक जोडी छैनन् तर तिनीहरू नजिक रहन र एक अर्काको सहयोगी छन्। वास्तविकता के हो भने तिनीहरू लामो समय सम्म सँगै बसेका छन्। उनीहरूसँग पागल कामका कार्यक्रमहरू छन् जसले कुनै पनि सम्बन्धमा दबाब दिन्छ, 'एक स्रोतले बेलायती टेबलोइडलाई बतायो। 'यो पक्कै अहिलेको लागि अन्त्य हो, तर यो कटु विभाजन होईन र उनीहरू दुवैले एक अर्कालाई सम्मान गर्दछन्।'
अझै, यो Zayn, 25, र Gigi, 22 को लागि राम्रोको लागि पर्दा हुन सक्दैन।
'यो एक आपसी निर्णय हो त्यसैले भविष्यमा पुनर्मिलनलाई कसैले पनि पूर्ण रूपमा इन्कार गरेको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'तर उनीहरूको टाउको कतातिर छ भनेर अहिलेको छैन।'
मंगलबार, मलिक पोष्ट गरे शर्टलेस तस्वीर भौं बढाउने क्याप्शनको साथ इन्स्टाग्राममा: 'जब जीवनले तपाईंलाई लिंबाहरू फ्याँक्दछन्, तिनीहरूलाई समात्नुहोस् ताकि तिनीहरूले तपाईंलाई ****** g अनुहारमा हान्दैनन्।'
विभाजन समाचार गीगीले इन्स्टाग्राममा उनको मान्छेको बारेमा कुश गरे पछि दुई महिना पछि आयो उनको जन्मदिन मा ।
'यस व्यक्तिलाई मैले माया गरेको शब्द भन्दा पनि बढि माया गर्नुहोस्, र उसको ड्राइभबाट प्रेरणा पाएर दिनहुँ राम्रो काम गर्नुहोस्। तपाइँको वर्षको चीर्स मेरो @ zayn - सबैभन्दा खुशीको खुशीको जन्मदिन र जीवनको २th औं वर्ष !! म तपाईंको छेउमा भएकोमा गर्व छु, 'उनले भिडियो र छविहरूको श्रृंखला क्याप्शन गरिन्।
यस व्यक्तिलाई मैले भन्दा पहिले लेखेको शब्द भन्दा बढी प्रेम गर्दछु, र उसको ड्राइभबाट प्रेरणा पाएको छु र तपाईको बर्षो उमेरको हर्षको चीर्स गर्न चाहन्छु जुन तपाईको मेरो वर्षभरि नै सबैभन्दा खुशीको जन्मदिन र २ 25 औं वर्ष हो !! म तपाईंको छेउमा भएकोमा गर्व छु x
द्वारा पोष्ट गरिएको साझेदारी गिगी हदीद (@gigihadid) जनवरी १२, २०१ at बिहान :10:१० बिहान PST
गत वर्ष Gigi को जन्मदिन मा, गायक मोडेल आफ्नो भनिन्छ 'सबै कुरा।'
Gigi र Zayn पहिलो नोभेम्बर २०१ dating मा डेटि began शुरू भयो। तिनीहरूको केही थियो हिचकी तर पूर्ण प्रेममा देखिन्थ्यो। धेरै बर्ष, त्यहाँ अफवाहहरु थिए कि तिनीहरु पनि थिए सगाई Zayn आफ्नो दाहिने knuckles मा शब्द 'प्रेम' को एक टैटू शुरू गरे पछि। उहि समयमा, गिगीलाई त्यो कहिल्यै बताउने औंलामा औंठी लगाएको भेटियो।
सोफिया वर्गारा र जुली बोउन्
के मेगिन केली कहिल्यै मुख्यधारा मिडियामा फर्किनेछ?
जेनिफर गार्नर र बेन एफिलेक सँगै फर्कने छैनन
डेमी लोभाटोको ओभरडोज पछाडि लाग्ने ड्रग्स पत्ता लाग्यो: रिपोर्ट
जुलाई को शुभकामना! ताराहरू कसरी स्वतन्त्रता दिवस २०१ celebra मनाइरहेका छन् हेर्नुहोस्
द्रता डी'अवंजो फर्रा अब्राहमको बिरूद्ध हिंसाको धम्की दिन्छ
ब्ल्याक Chyna लस एन्जलस स्ट्रिप क्लब मा १०k for को लागि होस्टिंग पार्टी
Ly 45 वर्षीया एलिसा मिलानो बिकिनीमा छक्क पर्छिन् - तस्वीर जाँच गर्नुहोस्
रे लियोटा पत्नी र छोरी
साशा बारन कोहेनकी पत्नी
चेरमा कतिवटा प्लास्टिक सर्जरीहरू थिए
विस्सम अल मान र ज्यानेट
ब्लेक शेल्टन मिरांडा ल्याम्बर्ट चक्कर
लुक रकहोल्ड र डेमी लोभाटो